Apple Inoburitsa Matatu Matatu Matsva eApple Watch Series 3 Campaign ye "CloseYourRings" Ndinobva mac
Dzakawanda runyerekupe dzinonongedzera kumwedzi waGunyana, tichava neshoko rakakosha ine huwandu hukuru hwezvinhu zvitsva, uye kubva ipapo iyo MacBook Pro renji yadonha izvozvi, mushure mekuona mazuva mashoma apfuura, kambani yakavandudza iyo Pro renji nemhando nyowani uye kubvisa iyo 2015 vhezheni yeiyo 15-inch modhi.
Apple ine mishandirapamwe yekushambadzira inomhanya kusimudzira zvigadzirwa zvayo. Iyo inoenderana neApple Watch inonzi "CloseYourRings", mushandirapamwe, iyo Apple yakatoburitsa shambadziro shomanana ye tikurudzire kuti tiite maekisesaizi neApple Watch uye nekudaro kukwanisa kuvhara akasiyana mabhendi ezvekuita ayo edu ezuva nezuva matanho anoyera.
Apple yeYouTube chiteshi ichangobva kugamuchira matatu matsva, ese akabatanidzwa mukati meYouYourRings mushandirapamwe uye patinogona kuona vatatu vakatsigira: Eric, Atilla uye Yocelin. Shambadziro yega yega inotiratidza mamiriro akasiyana, uko Eric ari pamudyandigere anozvimanikidza kufamba achitenda mhete dzeApple Watch, Atilla mutambi akasarudzika anoita zvemitambo dzakasiyana siyana uye Yocelin anofanirwa kusanganisa hupenyu hwemagariro nemitambo zuva nezuva kuyedza kuvhara zvindori.
Kana iwe ukashandisa iyo Apple Tarisa, zvirokwazvo iwe wawana marongero anoita chiitiko izvo zvinokurudzira zvakanakisa kuti tione patinenge takatenderera zuva rese, tiri pakupera kwevhiki, mazuva ayo mashoma mashandiro atinoita kunze kwekunge taakumbira, chiitiko chinorira isu hatisi kungochivhara.
Sezvandambotaura pakutanga kwechinyorwa chino, mune yakataurwa munaGunyana. iyo Apple Watch Series 4 ingangoona mwenje wezuva, saka izvi zviziviso zvichave zvekupedzisira zvekambani yemamodeli ayo atiri kupihwa kumusika, sezvo chizvarwa chinotevera, kana runyerekupe rwakasimbiswa, ruchasvika nechiratidziro chakakura kudarika icho chemamodheru aripo, izvo zvinobvumidza deredza mafuremu echigadzirwa uku uchichengetedza iwo akafanana nguva dzese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Inoburitsa Matatu Matsva Ekushambadzira eApple Watch Series 3 Campaign ye "CloseYourRings"
BBVA neBancaMarch vatobvumidza kushandiswa kweApple Pay
Blackmagic eGPU ndiyo yekutanga kadhi yemifananidzo inotengeswa neApple